Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Kianja golf / resort malaza indrindra any Etazonia
Tian'i Etazonia foana ny golf. Na dia tany Grande-Bretagne aza ny lalao, 45% n'ny toeram-pilalaovana golf eran'izao tontolo izao i Etazonia ary manana ny tompondaka lehibe maro.
Mahagaga 36.9 tapitrisa Ny Amerikanina dia nilalao golf tamin'ny taona 2020 fotsiny.
Tsy mahagaga raha ity firenena ity dia fonenan'ny angano golfing be dia be.
Miorina amin'ny fikarohana nataon'ny tranokala fampitahana sidina Mitadiava sidina mora, nanangona ny lisitr'ireo kianja filalaovana golf sy fialantsasatra malaza indrindra eto Etazonia izahay.
Ity torolàlana ity dia hanome anao fahitana ny amin'ireo klioba golf tokana indrindra eto an-tany. Manomboka amin'ny escort limousine ka hatramin'ny $ 250,000 ny isan'ny mpikambana, betsaka lavitra ireo klioba ireo fa tsy ny lalao golf fotsiny.
Kianja golf sy resort malaza indrindra any Etazonia
Maro amin'ireo taranja golf sy resort malaza indrindra any Etazonia no niforona 50 taona lasa izay. Ireo mpanao politika sangany sy mahery any Hollywood dia nanosika ny soroka na ny taranja na dia iza aza no mahalala izay lazain'izy ireo mandritra ny lalao!
Ny sasany amin'ireo taranja golf malaza indrindra any Etazonia dia misy ny Riviera Country Club any California, Shadow Creek any Nevada ary ny Pine Valley Golf Club any New Jersey.
Manohiza mamaky mba hahalalanao hoe iza amin'ireo golf sy resort no nanao ny lisitra 'malaza indrindra' any Etazonia.
Whistling Straits dia iray amin'ireo taranja roa mifandraika amin'ny The American Club. Izy io dia mihazakazaka roa kilaometatra amin'ny morontsiraka Lake Michigan amin'ny fomba rohy 36-lavaka. Ny taranja dia 6,757m ary noforonin'ny duo manambady, Pete sy Alice Dye.
Sangan'asa ity lalao ity. Izy io dia kasaina hampiantrano ny amboara faha-43 Ryder amin'ny 2021 ary tompon-daka amin'ny andrana araka izay tratrany. Efa nampiantrano marobe Tompondakan'ny PGA sy ny US Open Senior.
Azonao atao ny mitondra ny tenanao amina fonosan'ny golf hiaina ilay hazakazaka feno. Fonosana malaza iray ny To Dye For, izay misy fijanonana mandritra ny telo alina, lalao efatra 18 lavadavaka ary lesona golf 30 minitra.
Na dia miorina any Wisconsin aza izy dia mampatsiahy ny toeram-piompiana irlandey iray tsy miankina. Betsaka ny trano fisakafoanana azonao ihanana rehefa avy nilalao golf. Ny menan'ny fitaoman'i Angletera dia misy lovia sonia toy ny pudding toffe sticky sy lamban'ny zanak'ondry.
Miorina ao Augusta, Georgia, ity klioba ity dia nosokafana tamin'ny taona 1930. Ity dia iray amin'ireo klioba tokana indrindra any Etazonia satria izy irery dia misokatra ho an'ny mpikambana sy ny vahininy irery.
Ny ankamaroan'ny olona dia hahafantatra ny klioba Augusta aorian'ny fijerena azy amin'ny fahitalavitra isaky ny volana aprily. Ny Master's Tournament dia nampiantranoina tamin'ny taranja hatramin'ny namoronana an'i Bobby Jones tamin'ny 1934.
Ny taranja 18-hole, feh 72. Namboarin'ilay tompon-daka amateur, Bobby Jones ary mpanao mari-trano, Alister Mackenzie. Ity duo ity dia noporofoina fa pairing matanjaka ary ny vokany dia ohatra tonga lafatra amin'ny faran'ny madio sy misokatra amin'ny lalao golf amerikana.
Ny halavan'ny taranja manontolo dia 7,475 metatra. Ny lavaka tsirairay dia nantsoina tamin'ny anarana hoe zavamaniry satria akanin-jaza ny tranokala taloha. Ny lavaka voalohany dia antsoina hoe Tea Olive, miaraka amin'ny anarana hafa ao anatin'izany ny Flowering Crab Apple (1th) ary Carolina Cherry (4th).
Ny Kiawah Island Golf Resort dia laharana voalohany amin'ny taranja 100 an'izao tontolo izao (The Ocean course) tamin'ny taona 2020. Izy io koa dia nampiantrano ny Tompondakan'ny PGA tamin'ny 2021, izay iray ihany amin'ireo tompon-daka lehibe efatra natao ho an'ireo mpilalao golf matihanina.
Misy taranja dimy ao amin'ny Nosy Kiawah: ny Ocean course, Osprey Point, Oak Point, Turtle Point ary Cougar Point. Ny taranja tsirairay dia misy lavaka 18, 72 f. Misy lavaka folo any akaikin'ny Atlantika ary valo hafa mifanila mivantana, ny Ocean Course no manana ny lavaka amoron-dranomasina indrindra amin'ny Hemisphere Avaratra. Izany dia mahatonga ny làlan-drivotra miompana amin'ny rivotra izay manampy ny fanambin'ny taranja.
Ny Resort golf any Carolinianina atsimo dia mirehareha amin'ny trano fisakafoanana, fisotroana ary fisotroana kafe 14, ao anatin'izany ny Ocean Room sy Jasmine Porch. Azonao atao ny mandany fotoana fihenam-bidy any amin'ny spaoro sy salon misy kintana dimy ary mijanona ao amin'ny Sanctuary Hotel, villa Resort na trano kely manokana.
Any amin'ny Pacific Palisades, California, ny Riviera Country Club dia nisokatra efa ho zato taona. Ny fampianarana dia mandray hatrany ny Los Angeles Open ary miomana hampiantrano ireo hetsika golf amin'ny Lalao Olaimpika 2028.
Mitovy amin'ireo klioba maro hafa amin'ity lisitra ity, ho an'ny mpikambana ihany ny Riviera Country Club. Anisan'ireo mpikambana teo aloha Walt Disney sy Dean Martin. Tsy mahagaga raha ny elita ihany no manana fidirana amin'ity klioba tokana ity - honohono ho lafo ny mpikambana $250,000!
Ny taranja 18-lavaka dia misy fiasa manokana toy ny ahitra Kukuya, izay ahitra manan-danja avy any Afrika. Ny klioba koa dia ahitana klioba tenisy raha maniry handeha amin'ny fanatanjahan-tena hafa ianao. Azonao atao ny mijanona ao amin'ny iray amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny 24 voatendry raha toa ka tsara vintana ianao raha nasaina hilalao ao amin'ny klioban'ny mpikambana iray.
Klub Golf Pine Valley
Ny Pine Valley Golf Club dia nosokafana tamin'ny 1919 tany Southern New Jersey. Nanjary fantatra ho iray amin'ireo taranja sarotra indrindra eto an-tany izy io, ary iray amin'ireo fampianarana manokana indrindra.
Raha tsy manasa anao hitsidika ny Mazava ho azy amin'ny mpikambana iray ianao dia tsy azo inoana fa hilalao ity taranja ity amin'ny maha-mpikambana anao ianao. Misy ny siosion-dresaka fa manodidina ny 930 ny mpikambana eran'izao tontolo izao, na dia tsiambaratelo ambenana akaiky aza io lisitra io. Tsy toy ny klioba hafa izay manolotra fizotran'ny fangatahana mpikambana, ny filankevi-pitantanana ao amin'ny Pine Valley Golf Club dia manatona mpikambana vaovao.
2021 dia nahita fiovana lehibe teo amin'ny klioba - ny vehivavy dia afaka miditra ho mpikambana ankehitriny ary mankafy lalao tsy voafetra. Tamin'ny taona lasa, ny alahady tolakandro ihany no navela hilalao toy ny vahiny ny vehivavy. Ny volana septambra koa dia nahita an'i Pine Valley nampiantrano ny Crump Cup isan-taona, izay nomena anarana taorian'ny nananganana ny klioba. Ny andron'ny Crump Cup no fotoana ahazoan'ny olon-tsotra hidina ao an-tokotanin'ny klioba.
Aiza koa no tsy maintsy andehanana amin'ny lalao golf amin'ny alàlan'ny limousine? Shadow Creek dia tia manao zavatra amin'ny fomba hafa ary ity quirk ity dia ampahany amin'ny manintona azy fotsiny. Mila mijanona ao amin'ny hotely MGM any Las Vegas ny vahiny vao afaka milalao amin'ny lalao golf 20 ka hatramin'ny 30 minitra eo ho eo.
Shadow Creek dia nanomboka klioba tsy miankina tamin'ny 1989, saingy nanjary fantatry ny besinimaro tokony ho 20 taona lasa izay. Tom Fazio dia namolavola ny lalana 18-lavaka amin'ny oasis iray eo afovoan'ny faritra efitra, miaraka amin'ny fahitana tendrombohitra.
Ny fampianarana dia nampiantrano ny amboara CJ PGA Tour tamin'ny taona 2020 ary nampiantrano ny The Match: Tiger vs. Phil (Tiger Woods vs. Phil Mickelson) tamin'ny 2018.
Azonao atao ny manantena ny fahitana an-dakilasy sy tsara tarehy amin'ny iray amin'ireo taranja golf taloha indrindra eto amin'ny firenena. Ny Oakmont Country Club dia natsangana tamin'ny taona 1903 ary nitana ny lazany ho iray amin'ireo taranja sarotra indrindra.
Maitso haingam-pandeha ary bunker 175 lalina (ao anatin'izany ireo Church Pews malaza ratsy) no mahatonga ity taranja Penn Pennsylvania ity ho fanamby ho an'ny mpilalao golf efa za-draharaha indrindra aza. Ho afa-mandeha ihany ianao raha asaina manokana hanatrika ny klioba amin'ny maha vahiny anao na tena ho lasa mpikambana.
Ny klioba koa dia misy fampakaram-bady marobe sy hetsika orinasa any amin'ny efitrano fiasan'izy ireo. Ataovy ao amin'ny Ballroom be pitsiny ny hetsikao, na safidio The Library ho an'ny hetsika mangina sy akaiky kokoa.
Misy fampianarana enina samihafa ao amin'ny Bandon Dunes Golf Resort. Azonao atao ny mankafy milalao amin'ny làlan'ny rohy raha mijery ny Oseana Pasifika ianao. Ny Bandon Preserve dia taranja 13-lavaka izay mihoatra lavitra noho ny lalao tsara. Ny vola azo rehetra avy amin'ny fampianarana dia mankany amin'ny Alliance Wild Rivers Coast, izay manohana ny fiarovana, ny fiaraha-monina ary ny toekarena eo an-toerana.
Tsy ho noana ianao satria misy trano fisakafoanana sy fisotroana fito hisafidianana. Andramo ny sakafo any Pasifika Andrefana eo an-toerana ao amin'ny Pacific Grill, na ny sakafo nentim-paharazana Scottish ao amin'ny McKee's Pub.
Ankafizo ny lalao golf amin'ny fiononan'ny efitranonao manokana amin'ny fisafidianana efitrano ao amin'ny The Inn. Eto ianao dia ho afaka mahita fomba fijery tsy misy fiatoana momba ny Mazava ho azy fa eo am-baravarankely. Azonao atao koa ny misafidy ny hijanona ao amin'ny Lily Pond, izay ahafahanao manana tokotaninao manokana mijery ny ala. Safidy be dia be miaraka amin'ny trano enina azo isafidianana.
Ny Muirfield Village dia nanana laza tsara hanaraka satria ny anarany no fonenan'ny golf farany antitra. Jack Nicklaus dia te-hanaja ny taranja malaza rehefa namolavola ny azy izy tamin'ny 1974.
Dublin, Ohio dia lavitra an'i Ekosy, fa ny lalana kosa mijanona ho lovain'ireo lovany. Any amin'ny 220 hektara, ny mpikambana sy ny vahinin'izy ireo dia afaka milalao làlambe misy loza mitatao amin'ny rano, bunkers ary arabe tery.
Nicklaus dia manara-maso tsy tapaka ny fanavaozana ny làlana mba hahafahan'ny klioba manohy manova ny haitao sy ny fandrosoana amin'ny maritrano. Ny 2020 dia nahita fanarenana lehibe tamin'ny làlana ary lavaka maro no nohavaozina.
Misy toerana efatra hisakafoanana ao amin'ny klioba, ao anatin'izany ny Golden Bear Room izay ankafizin'ny mpianakavy, izay misy am-patana roa sosona.
Niorina tamin'ny taona 2009, The Country Club ao amin'ny Muirfield Village Foundation dia manampy ihany koa ireo ankizy mila filàna manokana any Ohio. Hatramin'ny niforonany, ny 250,000 tapitrisa $ dia natolotry ny fototra ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa isan-karazany.